Movavi Video Editor: Azịza gị niile Video edezi Needs - News Ọchịchị
Movavi Video Editor: Azịza gị niile Video edezi Needs
Video edezi na-atụle otu n'ime ihe ndị kasị oru na aka ọrụ na mbara ala. Nke a abụghị nanị n'ihi na ọ na-achọ a na-nkà set na ihe ọmụma nke na-eme ka ndị ọcha na-arụ ọrụ seamlessly na na mmekọrịta kamakwa n'ihi na e nwere nanị otu njuaka softwares si n'ebe na-enye nnukwu functionalities na oké ọnụ ahịa.
Kasị video edezi ngwaọrụ site na-eduga na-enye Nsukka ezigbo atụmatụ ma na-eri a uba na dị ka a n'ihi bụghị onye ọ bụla nwere ike ịzụta ha. Nke a bụ ebe a elu àgwà video edezi ikpo okwu a chọrọ ikwunye na ọdịiche. Ọfọn, asị hello na Movavi video nchịkọta akụkọ. Nke a oke itunanya ọnụ software awade a plethora nke ọrụ na a nta nke ndị price nke elu-ọgwụgwụ ngwaọrụ na ipuiche emeghari na ndokwa videos.
Ya mere, ihe bụ na ọ dị otú ahụ dị ịtụnanya banyere nke a akpan akpan software? Ka anyị chọpụta:
State nke nkà atụmatụ
E nweghị rọketi sayensị n'azụ na-amụta otú nna ukwu ahụ nkà nke edezi videos on Movavi. Ọ na-ewe nanị 20 nkeji ịmụta na ọrụ ahụ software na mgbe ị nwere ike ịga na-ike ịtụnanya videos maka onwe gị. The software dị ka ihe dị ịtụnanya akpaka video e kere eke atụmatụ na-arụ dum edezi, agwakọta na-anụcha n'ihi na ị na na click nke a button. The results nnọọ pụtara na ị ga-ahụ na ha kwere ha.
Ọzọkwa, Movavi Video Editor na-enye gị nhọrọ mbupụ videos niile na-ewu ewu nyiwe na a dịgasị iche iche nke formats. The ndepụta anaghị akwụsị n'ebe ahụ dị ka ego nke atụmatụ na nhọrọ na a ọma e na ndị mara mma gburu video edezi software dị nnọọ nọgide na-abịa. E wezụga video edezi na-enye ohere webcam kpọọ, video stabilization, ọdịyo ndekọ na ndị ọzọ na i nwere ike ịhụ ojiji nke.
E wezụga ụfọdụ mara mma nnukwu atụmatụ, Movavi Video Editor nwere na ọ dịghị ụzọ mie na ihe ndị kasị mkpa ngwaọrụ video edezi. Ọ na-enye ha niile ọtụtụ nkọwa.
Ị nwere ike ijikọ ma ozugbo bulite faịlụ site ọ bụla na ngwaọrụ ma ọ bụ isi iyi na-na na software na-eme ka dum usoro niile ọzọ mfe.
Ozugbo i nwere ihe niile ị chọrọ ị nwere ike nweta na-arụ ọrụ trimming, combing, edezi, agbakwunye music ma ọ bụ ihe oyiyi na ihe ndị ọzọ dabara ọcha nke art na ị deem kwesịrị ekwesị iji ike a pụtara akụkọ nke ihe ị chọrọ ịgwa gị kiriri na-irè n'ụzọ.
Ozugbo ị na mere na-arụ ọrụ gị anwansi, Movavi awade gị ike ịkọrọ ndị video n'elu ọtụtụ dị iche iche nyiwe n'elu internet ma ọ bụ ọbụna nanị na nyefee ya na ihe ọ bụla ọzọ na ngwaọrụ na-amasị gị.
Creativity na ya kacha mma
Ndị dị otú ahụ ụdị video editingis a nkwonkwo mgbalị n'etiti nchịkọta akụkọ ahụ na software na ha na-eji. Iji mezuo ya òkè nke ibu ọrụ, Movavi e kwajuru na a dịgasị iche iche nke okike ngwaọrụ na-ekwe ka gị tinye nzacha, screenshots na ikwu n'ụzọ gị video na ike ihe na resonates ruo ogologo oge na ọ bụla onye na ese ya.
Ọ bụ ezie na video edezi nwere ọtụtụ ihe na-eme na nkà nke onye na-akpata na kọmputa, na-a jide ọhụrụ software nwere ike ịmepụta kacha The Epic Nchikota na n'ịwa ịtụnanya pụta. Movavi Video Editor ka a otutu hụrụ na fraternity nke ndị mmadụ na-achọ ọkaibe ngwá ọrụ maka video mma.
Facebook akwụ $20 mln mmezi na mgbasa ozi ikpe
Isii nke Best Wi-Fi okwu
← OnePlus 6: All Glass, ibu ihuenyo Honor 10 Review →